Kooriyaan Kaabaa qunnamtii hunda Kooriyaa Kibbaa walii qabdu dhaabde - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaan Kaabaa qunnamtii hunda Kooriyaa Kibbaa walii qabdu dhaabde
9 Waxabajjii 2020
Kooriyaan Kaabaa qunnamtii Kooriyaa Kibbaa waliin qabdu hunda kan hoggantoota biyyoota lamaanii gidduutti taasifamu dabalatee nan dhaabe jette.
Kooriyaan Kaabaa waraqaa bittineessuui Kooriyaa Kibbaa hojii “diinaati” jechuun ibsiteetti.
Wal qunnamtiin bilbilaa guyyaa guyyaadhaan waajjira magaalaa daangaa Kooriyaa Kaabaa kan taate Kaa’esoong’tti taasifamaa ture har’a irraa jalqabee ni dhaabata.
Waajjirri kun wal dhabdee biyyoota lamaanii hir’isuuf waliin dubbatanii bara 2018 booda kan banamedha.
Kooriyaan Kaabaa “wal qunnamtii hoggantoota lamaan jidduu jiru hunda ni dhaabsifti, kunis har’a guyyaa sa’aatii jaha irraa eegalee ni dhaabbata,” jedhe Eejensiin Oduu Jiddu-galeessi Kooriyaa (KCNA).
Wal qunnamtiin waraana jiddutti taasifamus ni dhaabbate jette Kooriyaan Kaabaa.
Fuulbaanarrati sababa Covid-19 wal qunnamtiinsaanii waajjiraan taasifamu yeroodhaaf dhaabbatetti biyyoonni kunneen qunnamtiisaanii gama bilbilaatiin taasisaa turan.
Biyyoonni lamaan guyyatti si’a lama ganama sa’aatii 3 fi galgala 11’tti karaa bilbilaatiin wal qunnamu. Kooriyaan Kibbaa gaafa Wixataa ji’oota 21 keessatti yeroo jalqabaatiif bilbilli ganamarratti bilbilamee osoo hin kaafamiin hafe, inni galgalaa garuu kaafamee ture.
“Qondaaltota Kooriyaa Kibbaa waliin qaamaan wal arguu akka hin barbaachisne murteerra geenyeerra, isaan yaaddoo qofa kan nutti dabalan,” jedhe Eejensiin Oduu Jiddu galeessi Kooriyaa (KCNA).
Qondaalli Kooriyaa Kaabaa gane Kooriyaa Kibbaatti teessoo paarlaamaa argate
Obboleettii hogganaa Kooriyaa Kaabaan kan ta’an Kiim Yoojoong torbee darbe yoo Kooriyaan Kibbaa namoota biyya gananiin waraqaa barreeffama ofirraa qabu gara Kaabatti erguu hin dhaabsisne waajjiiricha akka cufaniif doorsifamaniiru.
Isaanis duulli waraqaa barreeffamaa kun walii galtee bara 2018 hoggantoota biyyootaa kan Kibbaa Muun Jee-iin fi Kiim Jaang-un jiddutti taasifame kan cabsudha jedhaniiru.
Lammiileen Kooriyaa Kaabaa ganan waraqaa sirna kooministii qeequu afuufeedhaan gidhanii ergu. Yeroo tokko tokko immoo akka lammiileen Kooriyaa Kaabaa waraqaa sanneen kaasanii ilaalaniif wantoota adda addaa waliin ergu.
Lammiilee Kooriyaa Kaabaaf maddi oduusaanii miidiyaa mootummaadhaan bulu qofa yoo ta’u hedduunsaanii tajaajila interneetii hin qaban.
Hariiroo biyyoota lamaanii eega hoggantoota biyyoota lamaanii bara 2018 si’a sadi wal argan booda fooyyaa’ee ture. Wal gahiin guddaan akkasii waggoota 10 oliif taasifamee hin beeku ture.
Kooriyaan Kaabaa hariirooshee Kooriyaa Kibbaa waliin kan kutteef dubbiin ishee Doonald Tiraamp waliin dhimma niwukilarii bara darbe taasifame ifa ta’ee murteerra gahamuun waan dadhabameef.
Biyyoonni lamaan eega waraana 1950-1953 booda walii galtee nageenyaa mallateessurraa kan hafe nageenyii waaraan jidduusaaniitti uumamee hin beeku.
16 Ebla 2020
Koroonaavaayiras: Lammileen Kooriyaa Kibbaa maaskii haguuggatanii filannoo gaggeessaa jiru
15 Ebla 2020
Shii Jinpiing hariiroo Kooriyaa Kaabaa waliin qaban cimsuuf
Sudaan loltoota booji'aman na jalaa ajjeeste jechuun Itoophiyaa himatte
Dureewwan G7 biyyoota guddataa jiran keessatti babal'ina Chaayinaa dura dhaabbachuuf $600bln ramaduuf
Sababiin du'a darggoota 22 mana shubbisaa Afrikaa Kibbaa maaliidha?
Raashiyaan misaayiliin magaalota Yuukireen haleelaa wayita jirtu Zeleniskiin Garee G7tti dubbatuufi
Jiruu Baqaa: “Biyya keenya jiraachuu dadhabnee baqanne, baqannees boqonnaa hin arganne”
Jaalalleewwan adda bahanii waggaa 20 booda wal-fuudhan garuu kaansariin gargar fo'e
Lola korma sangaa Kolombiyaa irratti ijaajjiin jigee namootni 300 ol miidhaman
Rakkoo daangaa Itoophiyaafi Sudaanirra jiruun miidhaan qaqqabuun ibsame
Yeroo dhuma kan haaromfame: 29 Muddee 2020